छाेरीकै ब्वायफेण्डसँग इन्गेजमेन्टपछि ह‌ंगामा ! - Nagarik Medi
छाेरीकै ब्वायफेण्डसँग इन्गेजमेन्टपछि ह‌ंगामा !
एजेन्सी- एक समलिङ्गी पिताले छोरीका प्रेमीसँग इन्गेजमेन्ट गरेका छन् । पिता आफ्नी छोरी र उनका पूर्व प्रेमीसँग छुट्टी मनाउन गएका बेला उनले आफ्नी छोरीका पूर्व प्रेमीलाई प्रेम प्रस्ताव राखेका हुन् । याे खबर बेलायतकाे हाे ।
डेली मेलका अनुसार ५० वर्षीय ब्यारी ड्रूइट ब्यारलो बेलायतका आधिकारिक रुपमा पंजीमृत समलिङ्गी पिता हुन् । म्यान्चेस्टरमा बस्ने ब्यारी आफ्ना उभयलिंगी (बाइसेक्सुअल) सहयोगी स्कट हचिन्सन (२५) का साथ सम्बन्धमा छन् ।
यी दुईले यो वर्षको सुरुवातमा आफूहरु अक्टोबरमा एक छोरीका अभिभावक बन्न लागेको घोषणा गरेका थिए । यसअघि स्कट ब्यारीकी २० वर्षीया छोरी स्याफरोनसँग थुप्रै महिनासम्म प्रेम सम्बन्धमा रहेका थिए ।